Burcad u dhacday guriga Angel di Maria oo af-duubtay xaaska iyo caruurta xiddigan xilli uu ku jiray ciyaartii xalay la garaacay kooxdiisa PSG – Gool FM
(Paris) 15 Maarso 2021. Xiddiga garabka kaga ciyaara kooxda Paris Siant-Germain ee Angel di Maria ayaa baddel looga saaray ciyaartii xalay ay kooxdiisa guuldarrada kala kulantay naadiga Nantes kaddib markii ay koox burcad ah u dhacday gurigiisa.
Di Maria ayaa ciyaarta laga saaray qaybtii labaad ee kualnkii 2-1 lagu garaacay PSG kaddib markii agaasimaha naadiga ee Leonardo uu arinta ku war galiyay tababaraha naadiga ee Mauricio Pochettino, kaasoo isaguna baddel ku saaray xiddiga reer Argentina waxaana uu ka baddelay Leandaro Paredes.
Sida laga soo xiganayo L’Equipe, Agaasime Leonardo ayaa u sheegay warbaahinta sababta Di Maria garoonka loogaga saaray inay ahayd burcadda u dhacday gurigiisa awgeed.
Majaladda RMC ayaa ku warrameysa in qoyska Di Maria oo ka kooban xaaskiisa iyo caruurtiisa ay ku sugnaayeen xilliga ay burcaddu soo weerareysay gurigiisa, waxaana burcaddu ay af-duub muddo kooban qaatay ku heysteen qoyskiisa.
Ma ahan markii ugu horreysay ee Angel di Maria iyo xaaskiisa ay bartilmaameed u noqdaan burcadda guryaha u dhaca, waxaana xaaladdan oo kale ay qabsatay xilligii uu ku sugnaa Manchester United.
Horudhac: Barcelona vs Huesca... (Blaugrana oo baadi goobaysa inay gaarto caawa afar kulan oo xiriir ah horyaalka La Liga)